Uyini umphumela weCoanda futhi ubaluleke ngani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-aerodynamics yesimanje isebenza ngomunye wemiphumela ebalulekile eba mqoka ezindizeni ukundiza. Lo mphumela waziwa njenge Umphumela weCoanda. Umphumela weCoanda kuyinto enzima ukuyichaza kepha iba yinto ebaluleke kakhulu ngendlela yokuthi ibe yisisekelo sokuthuthukiswa kwezimoto zasemoyeni.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi uthini umphumela weCoanda nokubaluleka kwawo.
1 Uyini umphumela weCoanda
2 Linga ukuqinisekisa umphumela weCoanda
3 Ukusebenziseka nokubaluleka
4 Izici kanye nelukuluku
Uyini umphumela weCoanda
Ukuze uchaze ukuthi uthini lo mphumela, kufanele ucabange ikhandlela elivuthayo. Uma sibucisha lobu buhle ngokubuphephetha, kuzoba yinto esheshayo. Uma senza ukuzivocavoca okufanayo kodwa sibeka ibhokisi elilingana kahle phakathi kwekhandlela nathi. Into ejwayelekile ukucabanga ukuthi iyona futhi iyasishaya, umoya uzohlakazeka ezinhlangothini zombili futhi ngeke ushaye useyili. Kodwa-ke, uma sisebenzisa ibhodlela lewayini esikhundleni sebhokisi, umphumela ngeke ufane. I-logic isiholela ekucabangeni ukuthi umoya uzosakazeka nhlangothi zombili futhi ngeke ukwazi ukukhokha ikhandlela.
Yize kubonakala kumangaza ngandlela thile, ikhandlela lingacinywa ngenxa yomphumela weCoanda. Futhi ingabe leyo Umphumela weCoanda uchaza ukugobeka koketshezi lapho kuhlangana nomzimba oqinile. Uketshezi luthola ushintsho ekuhambeni nasekuhambeni lapho lushayisana nomzimba oqinile.
Kungashiwo ukuthi umphumela weCoanda ngu uchungechunge lwezehlakalo ezikwazi ukuchaza ukusebenza koketshezi lapho lushaya phezulu. Kusetshenziswa njengesimiso sokuthi lonke uketshezi luvame ukuhehwa ezindaweni eziseduze esikhundleni sokubhampa noma ukukhukhuleka. Lokhu kuphambene nokuqina. Uma okuqinile kungqubuzana nokunye okuqinile, into ejwayelekile kakhulu ukuthi izoshayisa futhi iphambanise umzila wayo. Kodwa-ke, ezimweni zoketshezi lilethwe kimi ngobuso bendawo eqinile.
Linga ukuqinisekisa umphumela weCoanda
Uma senza isivivinyo esingenhla, siyabona ukuthi umoya uvame ukulandela indlela egobile yebhodlela esikhundleni sokuchezukela ezinhlangothini. Uma siphonsa ibhola lethenisi ebhodleleni lewayini, siyabona ukuthi umzila webhola uzoshintshwa, kepha ngeke ufane nomugqa webhodlela. Lokhu kusisiza ukukhipha imininingwane edingekayo ku- yazi ukuthi uketshezi luzolandela indlela ezungeze okuqinile.
Ngamazwi alula, i-viscosity yomsindo yi-ejenti eyinhloko yomphumela weCoanda ozovela. Lapho uketshezi kuqala luthinta umzimba onomugqa obushelelezi, ogobile, i-viscosity ye-fluid yikho okwenza izinhlayiya zithande ukunamathela ebusweni besiqinile. Yile ndlela okwakhiwa ngayo ishidi elifananayo nelifana nxazonke zomzimba oqinile. Umuntu angaqhathanisa le nkambiso yokwakha uhlobo lweshidi elizungeze umugqa womzimba njengokungathi yi-plasticine.
Zonke izinhlayiya ezisemanzini, kulokhu umoya, kamuva ziba nomthelela emzimbeni futhi zikhiqize izendlalelo ezintsha ezifanayo nezokuqala. Le yindlela ukuphambuka okwenziwa ngayo endleleni yoketshezi.
Umphumela weCoanda ukhonjisiwe futhi usetshenziswa nsuku zonke ekundizeni kwezindiza nokugijima kwezimoto. Kufanele wazi ukuthi, ukuze uthuthukise i-morphology yezimoto, kufanele wazi umphumela wokungqubuzana nomoya. Uma sazi ukuthi izinhlayiya eziwuketshezi zinamathela ngaphezulu, singakwazi ukuklama ubujamo obungcono bokusebenzisa umoya. Isibonelo esisetshenziswa kabanzi ngomphumela weCoanda izimoto zeFormula 1. Indawo enamapontozi asemaceleni, isebenzisa umphumela weCoanda ukuhambisa umoya omkhulu ubheke ezindaweni ezithile ezinjengaphansi kwaphansi, ama-diffusers kanye ailerons. Zonke lezi zinto zemoto zithinta ngqo ukubamba noma isivinini esikhulu.
Lokhu kwenza iCoanda isebenze enye yezinsika ezibalulekile kuma-motorsports nakwezindiza. Kungokufanayo nangezindiza. Ezimpikweni, indlela yomoya ihamba ngokugoba okuncane okusiza ukwenza amandla asiza ukubamba indiza emoyeni. Umoya ugobile futhi, kanye nokucindezeleka, nomthetho wesithathu kaNewton siyawazi wonke amandla asebenza kuphiko lwendiza.
Ngenxa yomphumela weCoanda, ukugeleza komoya nanoma yikuphi okunye uketshezi kungalungiswa futhi kuqondiswe ukuvumela onjiniyela ukuthi baklame izindlela zokuhamba ezisebenza kahle kakhulu. Leli thonya lomphumela weCoanda ku-aerodynamics yemoto kuyinto ebalulekile ekwakheni izimoto eziphephile futhi ezisheshayo. Ngaphezu kwalokho, le miklamo ye-aerodynamic isiza ukonga uphethiloli omningi, ngoba isiza ekwehliseni amandla okuhilizisana nomoya.
Izici kanye nelukuluku
Umphumela weCoanda uhlobene nokukhombisa uketshezi oluzungeze into. Uma sihlaziya wonke amandla nengcindezi yasemkhathini etholakala emkhathini endizeni enejubane eliphansi, umoya awuthathwa njengoketshezi nje kuphela, kodwa uketshezi olungenakuqondakala. Lowo moya uluketshezi olungenakuqhathaniswa kusho ukuthi umthamo wobukhulu bomoya uyohlala uhlala njalo ngesikhathi. Kumele futhi sazi ukuthi ukugeleza komoya akuhlukani komunye nomunye ukuze bakwazi ukwakha ama-voids, abizwa nangokuthi ama-voids.
Kunososayensi abaningi abaphika ukuthi umphumela weCoanda wenzeka emanzini. Kuthiwa lokhu kuphambuka endleleni yamanzi lapho kushayisana nobuso bomzimba oqinile kungenxa yokushuba kobuso. Ngakho-ke, kungashiwo ukuthi ukukhubazeka kweCoanda akusetshenziswanga kuzo zonke izinhlobo zoketshezi, ngoba ubungako bayo kanye ne-viscosity nayo kufanele icatshangelwe. Siyazi ukuthi umoya une-viscosity ephansi, ngakho-ke umphumela weCoanda wenzeka ngamandla amakhulu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngomphumela weCoanda nokubaluleka kwawo kwezindiza nokugijima kwezimoto.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Umphumela weCoanda